Semalt: Zvakakosha Zvisingabatanidzi Makasimba Epa IP Address kubva paGoogle Analytics
Makambani maduku uye makambani ekugadzirisa mawebsite avo eSeO ave achitarisana nematambudziko akawanda, mukati megwagwa ndechimwe chavo. Zvinogona kurwadza zvikuru kutarisa bhizinesi rako richibviswa pasi ne referrer spam uye motokari inowanikwa kubva mukati memamiriro ekunze.
kukosha kwekusiyanisa mukati memotokari kubva kunze kwemigwagwa hakugone kuonekwa zvakanaka. Max Bell, Mutengi Wekubudirira Kwevatereji ( Semalt , anoti Google Analytics inosvina kunze kwemugwagwa, zvido zvisingadadi, kureva spam, nekutyisidzira kwakaipa nekubatsirwa nevanowanikwa webhusaiti - computer san francisco parts. Kusava nehanya nekucherechedza migumisiro yemugwagwa inokonzerwa nevashandi pamwe newe nevatengesi kugovera pa webhusaiti yako vanogona kunyanya kunyora deta yako.
Sei uchitsausa huwandu hwenzvimbo dzeIndaneti dzinobva kuhofisi yako?
Vashandirwi venyu, vashandi pamwe chete, uye vadzidzisi vekutengesa vanogona kutungamirira pakuwa kwebhizimisi rako rekutsvaga pasina ruzivo rwako. Kuvandudza bhizinesi rekuona kwako nderimwe nyaya inowirirana nezvipupuriro zvako uye ichasvika pamusika wako..Vanhu vanopinda muwebsite yenyu vanoita sevanodzoka shure mushure mokupedza mabasa avo ezuva nezuva. Mukufamba kwenguva, vanopedzisira vachideredza maitiro enyu, mamiriro ezvinhu anoratidza maitiro ekugadzirisa mazwi enyu seinrelevant.
Kunze kweIndaneti maGoogle Algorithms inobva pane nhamba yevashandi uye nhamba yevanhu vanogadzira pawebsite yako. Iwe uri muchengeti kana webasa webhusaiti unoshanda pakusabvisa mazita chaiwo pahupoti yako yeGoogle Analytics? Heano matanho mashomanana uye mashoma ayo achakubatsira kuti uvhare maIndaneti zvachose.
Pinda kuGoogle Analytics uye sarudza admin section
Kurisa pachena nhoroondo dzako 'Pfuma' uye chengetedza zvinhu zvinowirirana neawe webhusaiti yako
Dzvanyira 'Ona' chinyorwa uye chengetera 'Firimu' icon
Tora bhokisi re 'Add Filter' kuti ugadzire firiji itsva
Ita 'Filter Name' iwe unogona kuyeuka nyore
Muchiitiko ichi, funga kushandisa 'Predefined' sarudzo se "Filter Type" yako pane "Custom" filter type
Sarudza mhando yehuyu uye chengetedza 'Bvisa'
Pinda neIndaneti kuti irege kubviswa. Ndiwe iwe uri kushanda pakusatendera imwe kero ye IP
Kanda bhatani 'Chengeta' kuti uchengetedze kuchinja kwako
Maererano nevarayiridzi vekutengesa, kushanda ne test test inoyevedzwa kuti urege kudzivisa ruzivo rwakakosha. Chimbofunga kudonhedzera deta yako kuhwandu yemafuta musati wasarudza deta yako. Tora firiji yako uye chengeta kuchinja kwenhamba yevashanyi pawebsite yako. Nhamba yevashanyi inofanira kudonha kusvika kune imwe nhamba chaiyo mushure mekutsvaga huwandu rweateri dzePI panzvimbo yako. Kurova misika yako yekutsvaga pakuguma kwekutsvaga kwekutsvaga kwekutsvaga injini kunokosha. Zvinyorwa zvako zvinoreva zvakawanda pamusoro pekutora kwako mukati memugwagwa wepakati uye referrer spam. Usatora hutano hwemaIndaneti kubva pane webhusaiti yako yebhizinesi nokuvatsvaga kunze kwekutsvaga Google Analytics.